हेलोवीनका लागि पिशाचका लागि रगत - थर्मोमिक्स रेसिपीहरू | थर्मो रेसिपीहरू
हेलोवीन को लागी पिशाच को लागी रगत
Cremas31 मिनेट3 व्यक्ति125२ क्यालोरी
हेलोवीन यहाँ छ र यी दिनहरू तयारी गर्ने समय हो वर्षको सबैभन्दा मौलिक र डरलाग्दो व्यञ्जनहरू। यस वर्ष मैले एक साधारण र धेरै आकर्षक पिशाच रगतको निर्णय गरेको छु।
यो नुस्खा तयार गर्न आदर्श छ एक विषयगत रात्रिभोज जहाँ तपाइँ दुबै मीठो र स्वादिष्ट व्यञ्जनहरु लाई सेवा गर्नु पर्छ। यो गर्न सरल छ र लगभग 30 मिनेटमा तपाईले टमाटरको सूप पाउनुहुनेछ तपाईंको अतिथिहरूको लागि सूची।
यस नुस्खाको बारेमा अर्को राम्रो कुरा यो हो कि तपाइँ यसलाई सेवा गर्न सक्नुहुन्छ अवसरको लागि विशेष कन्टेनरहरू। तपाईंले पागल वैज्ञानिक परीक्षण ट्यूबहरू, एक बोक्सी कल्ड्रन वा केही परीक्षण ट्यूबहरू फोटोमा जस्तै प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
1 हेलोवीन को लागी पिशाच को लागी रगत
2 तपाईं पिशाच लागि रगत लागि यो नुस्खा बारे थप जान्न चाहनुहुन्छ?
यो नुस्खा संग हाम्रो पार्टी को पिशाच तृप्त र राम्रो खुवाइनेछ।
कुल समय: 31M
1 स्तर चम्मच (खैरो साइज) चिली फ्लेक्स (वैकल्पिक)
1 400 ग्राम टमाटरको बोक्रा
टमाटरको रस 300 ग्राम
तरकारी ब्रोथ को 200 ग्राम
गिलासमा सफा सौंफ, बोकेको प्याज र बोक्रा र अलिकति कुचिएको लसुन राख्नुहोस्। हामी समयमा टोक्छौं Seconds० सेकेन्ड, गति 5।
हामी काँचको पर्खालहरूमा टाँसिएका टुक्राहरूलाई ब्लेड तिर तल ल्याउँछौं।
हामी तेल र मिर्च फ्लेक्स थप्छौं। हामी पोचा प्रोग्रामिङ गर्छौं Minutes मिनेट, १००º, गति १।
यस बीचमा, हामी टमाटरहरू निकाल्छौं, तरल बचत गर्छौं जुन हामीले प्रयोग गर्नेछौं।
अर्को, गिलासमा सुकेको टमाटरहरू थप्नुहोस् र तिनीहरूलाई पकाउनुहोस् Minutes मिनेट, १००º, गति १।
त्यसपछि हामी टमाटर, रस र शोरबा को तरल मा खन्याउछौं। नमक र काली मिर्च समायोजन गर्नुहोस् र पकाउनुहोस् Minutes मिनेट, १००º, गति १।
समय पछि हामी पीस गर्छौं १ मिनेट, गति 1।
नींबूको रसको राम्रो जेट थप्नुहोस् र नमक र काली मिर्च समायोजन गर्नुहोस्।
हामीले टमाटरको सूपलाई अलिकति चिसो गरौं र धेरै टेस्ट ट्यूबहरू र टेस्ट ट्यूबहरू भर्नुहोस्।
तपाईं पिशाच लागि रगत लागि यो नुस्खा बारे थप जान्न चाहनुहुन्छ?
मैले पहिले उल्लेख गरेझैं, नुस्खा अझै पनि छ टमाटर सूप एक धेरै विशेष स्पर्श संग।
El सौंफ यसले यसलाई केहि धेरै रमाइलो नोटहरू दिन्छ जुन बाँकी सामग्रीहरूसँग धेरै राम्रोसँग मिल्छ।
र चिली फ्लेक्स तिनीहरूले यसलाई धेरै रमाइलो मसालेदार बिन्दु दिन्छन्, त्यो हो, यो अलि रमाइलो छ तर ज्वलन्त छैन। कुनै पनि अवस्थामा, तपाइँ पहिले नै थाहा छ कि यो घटक तपाइँको मनपर्ने प्रयोग गर्न सकिन्छ।
याद गर्नुहोस् कि यदि पार्टीमा वा डिनरमा त्यहाँ छ4वा5वर्ष मुनिका बच्चाहरु खुर्सानी हटाउनु पर्छ किनभने सबै बच्चाहरू यी स्वादहरूमा प्रयोग गर्दैनन्।
विधि हो शाकाहारी र सेलियाक वा ग्लुटेन, अण्डा, ल्याक्टोज र नटहरू असहिष्णु दुवैका लागि उपयुक्त। यसमा 150 kcal भन्दा कम पनि हुन्छ त्यसैले यो हाम्रो लागि सन्तुलित आहारको लागि राम्रो हुनेछ।
यो हुन सक्छ फ्रिजमा राख्नुहोस् अधिकतम3वा4दिन सम्म यो फ्रिजमा राखिएको छ। सुनिश्चित गर्नुहोस् कि कन्टेनर सूपको भोल्युममा सकेसम्म फिट हुन्छ ताकि त्यहाँ धेरै हावा नहोस्। यसरी यो धेरै राम्रो सुरक्षित हुनेछ।
थप जानकारी - हेलोवीन को लागी9अचम्मको विचार
अन्य रेसिपीहरू पत्ता लगाउनुहोस्: सजिलो, हेलोवीन, सूप र क्रिम
लेखको पूर्ण मार्ग: थर्मोरसेटास » सामान्य » सजिलो » हेलोवीन को लागी पिशाच को लागी रगत
भट सोया दूध संग